Kulan labo cisho oo wadatashi ah oo maanta u furmay Golaha Wasiirada Somalia – Balcad.com Teyteyleey
Kulankan wadatashiga ah ee labada cisho socday ayaa lagu lafagurayaa arrimaha ay dowladu siisay mudnaanta sida ka hortaga abaaraha, soo celinta amniga & nabadeynta, kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, gaarsiinta doorashooyin hal cod iyo hal qof ah, dib-u-heshiisiinta, midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga ah. Khubaro ku xeel dheer arrimaha mudnaanta leh ayaa jeedin doona casharo si wasiirada loogu sharaxayo xaalada dalka iyo sida loo gaari karo in waxqabad dhab ah lala yimaado.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ugu danbeyntii kula dardaarmay Wasiirada inay waqtigooda ka faa’iideystaan oo labadan cisho ay ku soo saaraan barnaamij dhameystiran oo ay ku mideysan-yihiin si shacabka Soomaaliyeed loogu adeego. Wasiirada ayaa laga sugayaa inay soo saaraan siyaasad cad-cad oo dalka u horseeda horumar iyo in howlaha loo igmay dowladda ay hirgeliso iyadoo laga duulayo hadalkii Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ee ahaa Nabad & Nolol.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka Konfur-Galbeed oo Al-shabaab ku eedeeyay in ay gubeen raashin gargaar ah oo loo waday dad dhibaateysan